Safaaradda Mareykanka ee Somalia oo si weyn ah u difaacday Wariye Harun Macruf - Jowhar Somali Leader
Home News Safaaradda Mareykanka ee Somalia oo si weyn ah u difaacday Wariye Harun...
Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa si bareer ah u difaacday Wariye Harun Macruf oo ka tirsan laanta afka Soomaaliga ee VOA, kaasoo dhowaan Hey’adda Sirdoonka iyo Nabadsugida Soomaaliya ku eedeysay inuu leeyahay xiriir khatar ku ah Amniga Qaranka Soomaaliya.
Qoraal kooban oo la soo dhigay barta Twitter-ka ee Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay NISA inay weerar ku tahay madax banaanida iyo xoriyadda Saxaafadda, iyadoo ammaan u jeediyay kaalinta Wariye Harun Macruuf.
“Harun Macruf waa Wariye Ixtiraam mudan, oo xirfad sare leh, waa mid ka mid ah Wariyeyaasha ugu saameynta badan, weerarka NISA wuxuu hanjabaad ku yahay Saxaafadda xorta iyo Madax bannaanida oo aas aas u Dimoqraadiyadda iyo la xisaabtanka dowladnimada Somalia”ayaa lagu yiri Warka ka soo baxay Safaaradda Mareykanka.
Arrintan ayaa jawaab u ah qoraalkii dhowaan ka soo baxay NISA ee ka dhanka ahaa Wariye Harun Macruf, taasoo si weyn dad badan uga falceliyeen, una garab istaageen Wariye Harun Macruuf.
Wariye Harun Macruf ayaa ah wariye ku taqasusay baaritaanka, kuna xeel dheer inuu xogo lagu kalsoonaan karo ka helo gudaha Al-Shabaab, iyadoo aad loogu ammaanay buuggiisa uu ka qoray Arrimaha Al-Shabaab ee la magac baxay “Inside Al-Shabaab”.
Shirka Wadatashiga Dowlad Goboleedyada oo ka furmay Dhuusamareeb